कोरियामा गर्मी बढ्यो, बरफ कफी पिउनु हुन्छ ? बिचार गर्नुस् है... - Fonij Korea
कोरियामा गर्मी बढ्यो, बरफ कफी पिउनु हुन्छ ? बिचार गर्नुस् है…
लेखक: बिमल सिं लामा | प्रकाशीत मिति: July 17, 2019
कोरियामा गर्मी बढ्यो, के गर्नुहुन्छ ? अवस्य पनि चिसो पेय पदार्थहरु धेरै मात्रामा पिउने गर्छौ । कोही कफीको पाराखी हो भने उसको पहिलो रोजाइ पक्कै पनि आइस(बरफ) कफी नै हुने गर्छ । तर बिचार गर्नुस् है । दक्षिण कोरियाको खाद्य तथा औषधि सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनले यहाँ रहेका अधिकांश कफी सपहरुमा गुणस्तर हीन आइसको प्रयोग गरेको पाइएको छ । त्यो पनि फ्रेन्चाइज कफीसपहरु नै ।
खाद्य तथा औषधि सुरक्षा मन्त्रालयले जुन १० देखि ९ जुलाई सम्ममा ४२८ आइस पेय पदार्थको संकलन गरेका थिए । जस मध्ये ४१ वटा पसलमा उच्च मात्रामा पोटासियम र हानिकारक जीवाणुहरु रहेको पाइएको जनाएको छ ।
यस्तो कफी पसलहरु सबै नाम चलेका फेन्चाइजको आउटलेट(शाखा) रहेका थिए । जसमा स्टारबक्सको ६ शाखाहरु, एडिया कफीको ७, ए ट्वोसोम प्लेसको ५ र होलील्स कफीको ३ रहेको छ ।
उक्त कफीमा प्रयोग गरिएको आइसमा तोकिएको मापदण्ड भन्दा बढी मात्रामा पोटासियम मिसाएका थिए । कोरिया टाइम्समा लेखिएको समाचार अनुसार एक पसलमा त मापदण्ड भन्दा १६ गुणा बढी पोटासियम प्रयोग गरेको थियो । मापदण्ड अनुसार १ लिटर पानीमा जम्मा १० मिलिग्राम मात्र पोटासियम प्रयोग गर्न पाउछ । त्यस्तै दुई पसलमा अत्याधिक मात्रामा हानिकारक जीवाणु पाएका थिए ।
मन्त्रालयले उक्त रिपोर्टको बारेमा क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारीलाई सुचित गरेको छ । र आवस्यक प्रक्रिया पुर्याएर उत्पादन नगरे सम्मका लागी ४१ वटै पसलहरु बन्द गराइएको जनाएको छ ।